ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ "ဘုရားကျောင်းနှင့်ပြည်နယ်များ၏ Separation" လား?
အဆိုပါ Myth ဟာ Debunking: ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွက်မဖွင့်ပါလျှင်, ထိုအခါဒါဟာမတည်ရှိပါဘူး
ဒါဟာထားသောစာပိုဒ်တိုများ "အဲဒီစကားမှန်သည် ဘုရားကျောင်းနှင့်ပြည်နယ်များ၏ခွဲခြာ" တကယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ်လာပါဘူး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ။ တချို့လူတွေကဤအချက်ကိုထံမှမမှန်ကန်ကြောင်းကောက်ချက်ဆွဲသောပြဿနာတစ်ခုသို့သော်ရှိပါသည်။ ဒီထားသောစာပိုဒ်တိုများ၏မရှိခြင်းကြောင့်မမှန်ကန်တဲ့အယူအဆဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်တရားစီရင်ရေးမူအရအဖြစ်အသုံးပြုမရနိုငျကွောငျးမဆိုလိုပါ။
အရေးကြီးသောဥပဒေရေးရာအယူအဆများကိုရေတွက်နိုင်ရှိပါတယ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပေါ်လာမထားတဲ့ လူတွေသုံးစွဲဖို့လေ့အတိအကျထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူ။
ဥပမာအားဖြင့်, ဘယ်နေရာမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌သငျ "ကဲ့သို့စကားများတွေ့ပါလိမ့်မယ် privacy ကိုမှလက်ျာဘက် " သို့မဟုတ်တောင်မှ "ဟုတရားမျှတသောတရားခွင်မှလက်ျာဘက်။ " ဒီအဘယ်သူမျှမကအမေရိကန်နိုင်ငံသား privacy ကိုတစ်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်တစ်တရားမျှတသောတရားခွင်ရှိကြောင်းဆိုလိုပါသလား? ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရောက်ရှိသည့်အခါမျှမတရားသူကြီးအစဉ်အဆက်ကဤအခွင့်အရေးများကိုမှီငြမ်းသင့်ကြောင်းဆိုလိုပါသလား?
၏သင်တန်းမပေး - ဤတိကျတဲ့စကားလုံးများ၏မရှိခြင်းသည်ဤအတွေးအခေါ်များကိုတစ်ဦးမရှိခြင်းလည်းရှိကွောငျးမဆိုလိုပါ။ မျှတသောတရားခွင်ပိုင်ခွင့်ဥပမာ, အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်ရှာရမလဲရိုးရှင်းစွာမဟုတ်ရင်အဘယ်သူမျှမကငျြ့ဝတျသို့မဟုတ်တရားဝင်သဘာဝကျပါတယ်ကြောင့်စာသားထဲမှာသည်အဘယ်အရာအားဖြင့် necessitated ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးရာဇဝတ်သားတရားစွဲဆိုမှုမှာစွပ်စွဲခံရသူခရိုင်ယခင်ကဥပဒေဖြင့်စေ့စေ့မေးမြန်းပြီးခဲ့ကြရသဖြင့်, အသိပေးခံရဖို့ရာ, ထိုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြရသောပြည်နယ်နှင့်ခရိုင်၏ဘက်မလိုက်ဂျူရီများကတစ်မြန်ဆန်နှင့်အများပြည်သူရုံးတင်စစ်ဆေးခွင့်ရယူခံစားကြရမည် အဆိုပါစွပ်စွဲချက်၏သဘောသဘာဝနှင့်အကြောင်းမရှိ; သူ့ကိုဆန့်ကျင်မျက်မြင်သက်သေများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခံရဖို့; မိမိအမျက်နှာသာအတွက်မျက်မြင်သက်သေများရယူဘို့မသင်မနေရဖြစ်စဉ်ကိုရှိသည်ဖို့, သူ၏ကာကွယ်ရေးအတွက်အကြံပေးများ၏ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးရှိသည်။
အဲဒီမှာတစ်ဦးအကြောင်းကိုအဲဒီမှာဘာမျှ "တရားမျှတသောတရားခွင်," ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်သည်ဤပြင်ဆင်ချက်တရားမျှတတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေများအတွက်အခြေအနေများတက် setting ကြောင်းဖြစ်ပါသည်: စသည်တို့ကိုအများပြည်သူ, မြန်ဆန်, ဘက်မလိုက်ကန့်ကွက်သည့်ရာဇဝတ်မှုများနှင့်ဥပဒေများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်,
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအထူးသင်တစ်ဦးတရားမျှတသောတရားခွင်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုပြောမထားဘူး, ဒါပေမယ့်သာ created အခွင့်အရေးကိုတရားမျှတစွာရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့လက်ျာဘက်တည်ရှိသောအဓိကအကြောင်းရင်းအပေါ်အသိပါစေ။
အစိုးရကလည်းတရားခွင်မျှတအောင်နေချိန်တွင်အထက်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများအားလုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လမ်းကိုတွေ့လျှင်ထို့ကြောင့်, တရားရုံးသူတို့အားလုပ်ရပ်များ unconstitutional ဖြစ်ကိုင်ထားလိမ့်မယ်။
ဘာသာရေး Liberty မှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလျှောက်ထားခြင်း
အလားတူပင်တရားရုံးများကို "ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်" ၏နိယာမထဲမှာရှိကွောငျးတှေ့ပွီ ပထမဦးစွာပြင်ဆင်ရေး အဲဒီစကားကတကယ်တော့အဲဒီမှာမဟုတ်ရင်တောင်။
ကွန်ဂရက်အဘယ်သူမျှမပညတ်တရားတော်ကိုကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတစ်ခုထူထောင်လေးစား, ဒါမှမဟုတ်မြို့အခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုတားမြစ်စေရမည် ...
ထိုကဲ့သို့သောပြင်ဆင်ရေး၏အချက်နှစ်ဆဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာကသေချာ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက် ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်စည်းရုံး - - ကြိုးစားခဲ့အစိုးရထိန်းချုပ်မှုကနေဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ ဤသည်အစိုးရ၏ယုံကြည်ဖို့သို့မဟုတ်သင်ပေးဖို့အဘယ်အရာကိုသင်သို့မဟုတ်သင့်ဘုရားကျောင်းဖြစ်စေမပြောနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကအစိုးရ, ပြဋ္ဌာန်းရှိစေရေး, ဒါမှမဟုတ်ပင်မဆိုဘုရားကိုမကိုးကွယ်အတွက်ယုံကြည်ချက်အပါအဝင်အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးအယူဝါဒ, မြှင့်တင်ရန်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ရပါဘူးသေချာ။ ဒါဟာအစိုးရကဘုရားကျောင်း "တည်စေ" သောအခါဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာဥရောပ၌များစွာသောပြဿနာများကိုဖန်တီးသောကွောငျ့ဤအမှု, ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏စာရေးဆရာများကြိုးစားကြဒီမှာဖြစ်ပျက်ကနေအတူတူပင်တားဆီးချင်တယ်။
သိပ္ပံ defining - ဘယ်လိုသိပ္ပံသတ်မှတ်ထားသောသလဲ?
Mictlantecuhtli - Aztec ဘာသာတရားအတွက်မရဏ၏ဘုရားသခငျသညျ
ဗေဒင်တစ် Pseudoscience လား?
ဒါဟာလူသား Be ဖို့ဘာဆိုလိုသနညျး
မော်တော်ဆိုင်ကယ် Chrome ကိုပန်းကန်
အဆိုပါ Dugong အကြောင်းလေ့လာပါ
အဆိုပါ Qin မင်းဆက်၏အမွေအနှစ်
WGC Dell ကပွဲစဉ်ချန်ပီယံရှစ် Play
ဒေါက်တာ Francis က Townsend, အင်ခေတ်ပြည်သူ့ပင်စင်စည်းရုံးရေးမှူး
ပင်ပန်းခြင်း - လုပ်ငန်းခွင်ရန်
အမေရိကန်သမိုင်းအတွက်အားလုံး 18 အစိုးရ shutdown
ထိပ်တန်း 15 မရှိမဖြစ် Lex Luthor ရုပ်ပြ